Bentley Map XM, dareenka ugu horeeya - Geofumed
Bentley Map XM, Imaanshiyaha Kowaad
Mee, 2008 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Bentley Map waa version ka XM waxa uu ahaa Microstation Geographics in 8 version, talooyinka, ma filan inuu faahfaahin tagaan, halkii aan su'aalo dhowr ah oo aan rajaynayaa in si loo xaliyo ilaa si ay u tagaan oo ay ka shaqeynayaan ciyaaro.
Hawlaha V8 iyo qaabka waa la dayactiray, inkastoo moobilku isbeddelay
V8 xasuusto in format la fuliyo ee ku saabsan 2003 / 2004, war wanaagsan waa in file V8 la akhrisan kartaa by Bentley MapXM sida MicrostationV8. Halkaas oo ay jiraan isbedel ku sifooyinka socdaalka ee mashruuca Geographics "fasalada feature" mashruuca XFM a a ... laakiin format V8 weli isku mid.
Markii hore DGN ahaa dulinka ah map fudud mslink in go'aamiyey xiriir la database a, waxay ahaayeen sifooyin dulinka kuwan, centroid ama jirrabo da'ayeen. In kasta oo timaha aan jiido, waxaa loo aqoonsan yahay in Geographics aan ahaa qalab geospatial laakiin sida ay u yeedheen "ad-injineernimada" in uu yahay nidaam dadka isticmaala of injineernimada / naqshadaha waa sandal ah ee Bentley, oo la soo bandhigay awoodda, u falanqeeyaan oo ay daabacaan xogta xaddidan.
Oo intuu kala bar waxaa loo jiido timaheeda, ujeedooyin ah "geoengineering" waxa ay ka shaqeeyeen, iyadoo la isticmaalayo Publisher si ay ugu adeegaan xogta Project falsan iyo si ay u maareeyaan, had iyo jeer hoos u gaar ah qosol si loo fahmo xogta. Waxaa lagu dhaleeceeyay in khariidadu ay "ku xirneyd" iyo in ay kaliya mashruucaas u isticmaashay in ay isku xiraan vector iyada oo xogta dibadda ah. Nidaamku wuxuu bedelay markii ay heleen technology XFM in ay shirkadda German ISIS, inkastoo uu u tageen inay 2005 shirka marka si rasmi ah u keenta Geospatial Management, halkaas oo schema kala bixiyc, kaas oo qaab-dhismeedka data galay map si soo bandhigay ayaa lagu arkay ay karaa destrompar lagu falanqeeyay aan DGN ah ... haddana waxaa la tusay isku xira GIS ah, jidaynayey ula falgalaan MXD ama SDE Project falsan ama si fudud Geographics.
... iyo jiidashada timaha ... si daacad ah u bilaabista kartuunada booska waa ...
Si kasta ha ahaato waxaan jecelnahay sii wadista qaabka V8 inkasta oo mulkiiluhu uu bedelay baqshaddii hore ilaa .NET
Qorshaha mashruuca isla waa la hayaa, inkastoo ay si buuxda u bedeshay habka wax loo qabto
Markii hore, mashruuca Juqraafiyadeed wuxuu leeyahay saynisyahanno, oo leh taxane taxane ah oo kaydiya qaybo kala duwan ee mashruuca. Waa hagaag, sharraxaadda qaabdhismeedka waa la hayaa, laakiin laba qaybood ayaa lagu daraa si loo kaydiyo qaabka XML
Laga soo bilaabo qalabixinta XFM, qaab-dhismeedka XML (schema) ayaa lagu daray oo bilaabay V8 waxa ay ugu yeeraan "Maaraynta Gobollada"Aad u xoog badan, laakiin qayba badhkuna liqo.
Haddaba Bentley Map XM tani waa sida loo maareeyo mashaariicda inkastoo markii hore soo baxaya madaama interoperability kale, arrimuhu waa u guureen halkaas ... waa in loo hagaajiyo wajiga aan furfurnayn isticmaalayaasha oo hore la ogaado Geographics (jidka ha oo lagu dhisayo ee mashruuca laakiin habka loo shaqeynayo, u-qaybi sifooyinka ... waxaana ka hadlaa dadka isticmaala kuwa aan-horumarin).
Hadda waxaan tijaabinayaa nuqul, waxaanan jiray dhowr su'aalood oo aan rajeynayo inaan xalliyo maalmaha soo socda ... hadaan illaa aan ka tago Baltimore:
1 Juquraafi ahaan walxaha sheyga wuxuu lahaan karaa sifooyin kala duwan, tusaale ahaan, xuduudaha hantida waxay noqon kartaa xuduudka tufaaxa, xuduudaha xaafad iyo xudduud degmo. Iyadoo la hirgelinayo xogta ku jirta foomka XML, miyay isku mid noqon kartaa ama waa in walxaha kala duwan loo abuuro sifooyin kala duwan?
2 Ma jiraa wizzard u ogolaanaya mashruuca juqraafi ee XFM? Waxaan ula jeedaa, bedeli karin mashruuc lagu kaydiyaa Access via ODBC ama Oracle, oo u beddesho sifooyinka inuu kasoo muuqdo fasalada, qaybaha ... aad dajiyaan karaa mashruuc, waxa beddeli kartaa map a si sifooyinka ah in mar hore ayaa loo xilsaaray si loo hawl Fasalada muqaalka ah? ama in Index uu aqoonsado khariidadaha diiwaangashan, agagaarka mapid
Waan sii wadeynaa hadal ...
Post Previous«Previous Google Earth, May Update update 2008
Post Next Bentley Map XM vrs. Juquraafiyada V8Next »